I-ArchLinux + KDE: Faka amaphakheji kalula usebenzisa i-Apper | Kusuka kuLinux
De Uhlelo lokusebenza Sengivele ngakhuluma nawe kwesinye isikhathi, isiphetho sangaphambili sePakejiKit esivumela ukuthi sifake izinhlelo zokusebenza kalula, ngaphandle kokusebenzisa i-terminal.
ngiyayithanda I-Pacman, kepha kungenzeka ukuthi omunye umsebenzisi we I-ArchLinux ufuna ithuluzi lokuqhafaza ukufaka amaphakheji akho. Ukusatshalaliswa okufana Chakra y ManjaroKubonakala kimi ukuthi banesifaki sokuqhafaza, kepha ku-ArchLinux asikho, noma okungenani lokho engikwaziyo.
Kungaleso sizathu-ke nginqume ukuzama futhi ngahlala Uhlelo lokusebenza ukubona ukuthi kuyasebenza yini futhi kusimangaze !!! Iyasebenza.
Anginazo izikhalazo. Yize amakhosombe kufanele asethwe ngesandla, konke okunye ukusebenza (Vuselela bese ufaka amaphakheji) kusebenza izimanga.
Kungakuhle uma omunye umsebenzisi wenye i-Desktop Environment, esebenzisa i- Arch, zama futhi ungitshele ukuthi kuyasebenza yini. 😉
Ukufaka Uhlelo lokusebenza sesiyazi inqubo:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-ArchLinux + KDE: Faka amaphakheji kalula usebenzisa i-Apper
Ngothando, kepha ngiyenqaba ukukuzwa, ngiyayithanda i-pacman xD
Futhi mina, nami .. kepha kuhlale kukhona ofuna yonke ihluzo 😀
Yebo, ngisebenzisa zombili izindlela (igrafu-ikhonsoli), noma ngisebenzisa kakhulu ikhonsoli ukuphatha amaphakheji.
Uthatha isinqumo sokuthi ukhetha i-terminal (futhi ngokwengxenye ngiyayiqonda kangcono nsuku zonke, ngaphezu kwesisodwa ngichithe intambama yonke ngijikeleza edeskini lami ngokulandela izinyathelo zomunye umfundisi usebenzisa umphathi wephakheji esikhundleni se-terminal), kepha ... wazi kanjani wonke amaphakheji onawo?
Enye yezinto engithanda ukuyenza kakhulu ukuhlola abaphathi bephakeji, ukuthola izicelo ezinelukuluku, ama-addon, ama-applet ... lapho ku-terminal ngicabanga khona (ngicabanga ukuthi, ngiseyi-novice) okungenzeki ngaphandle kokuthi ngazi cinga okuthile (lapho usuvele kufanele wazi okuningi noma okuncane igama lephakeji okukhulunywa ngalo, futhi kwesinye isikhathi igama eliqondile).
Okwamanje ngeqiniso ngicabanga ukuthi zombili izindlela ziyizinketho ezinhle zincike kulokho, kwesinye isikhathi ukuphela (lapho uvuselela, ngokwesibonelo), kokunye isikhombimsebenzisi sokuqhafaza ... kuyinto enhle ngomhlaba we-GNU / Linux, ukuthi kukhona zonke izinhlobo zama-flavour ongakhetha kuzo (kuphela ezinye ziqalekisiwe futhi zinokunambitheka okufakelwayo, kepha ungakhetha ukunambitheka okuthanda kakhulu).
Nginokungabaza okuthile mayelana ne-pacman futhi ngithanda ukufunda kuwe
Ake sithi ngizofaka okuthile:
Sudo pacman -S-package-name
Ngemuva kokuyithola ungibuza imibuzo eminingi engingazi ukuthi ngiphendule ngithini uma u-Y noma u-N
Ngabe lokhu kumayelana nani?
Yini okufanele ngiyenze noma ngenzani uma ngifaka okuthile?
Umngane omuhle, ngoba ngokuvamile lokho ekwenzayo, okokuqala kukwazisa ngokuthembela okuzodinga ukukufaka ukwenza uhlelo lusebenze, bese likubuza ukuthi uqinisekile yini ukuthi ufuna ukulufaka, uma unqaba (ngenxa yokuthi ukuthi ukuncika kunegama ongalithandi noma izizathu ezingokoqobo ezingafiki engqondweni) umane ukutshele ukuthi awufuni ukwamukela ukulanda kokuncika okuzokwenza uhlelo lusebenze.
Yile ndlela engiyiqonda ngayo okungenani, futhi ngingu "novice", bengingunyaka, kusukela ngo-Okthoba nyakenye, ezweni le-Linux, futhi ngisanda kuqala nge-Arch. Yize njengoba uzobona, ngisekhona ku-Win yami ... ubone ukuthi ngingadlula ngapha nangapha hehe.
UCharles :: .. kusho
Ungapheqa amaphakheji we-pacman kanye ne-aur nge-pkgbrowser bese usebenzisa i-terminal ukufaka.
Phendula uCarlos :: ..
Bengiyifakile isikhashana, iyasebenza, ngicabanga ukuthi ingahle ilungiselelwe ukukwazisa ngokuzenzakalela ngezibuyekezo ezintsha ezitholakalayo.
Kepha ngincoma ukusetshenziswa kwayo ukuthola amaphakheji kuphela, bese uwafaka nge-pacman.
KwiManjaro ingasetshenziswa futhi, kepha okuza ngokuzenzakalela yiPamac.
IManjaro + KDE iyona distro embi kunazo zonke engake ngazibona, futhi ngidlule kokuningi ...
Angikaze ngibone umphathi wephakeji elilodwa kumodi yokuqhafaza efanelekile. Kepha akulona iqiniso elincane ukuthi 'bangobubi obudingekayo' kubantu abasha.
Kulungile okuhle kakhulu yiSoftware Center, kepha okubi wukuthi iyi-100% GTK +.
Kulabo bethu abasebenzisa i-Fedora, i-RHEL noma i-CentOS sisebenzisa i-yum ebabazekayo :). Sanibonani Oscar
I-yum ikude kakhulu nokukhanga, okokuqala nje iskripthi esisheshayo nesindayo sePython.
yum isivele ikhona yenziwe kahle futhi ibizwa nge-zipper - nayo eyenziwe kuC.
Kungani ihlale ingicela iphasiwedi uma ufaka uhlelo?
Ukususa umkhuba omubi ongena ku-Windows ukufaka ngaphandle kokukucela nge-password yakho.
Ukuqala ngeWindows Vista, icela imvume yakho ngisho nokususa ifayela. Kimi, intofontofo maqondana neWindows XP.
Uma usebenzisa i-akhawunti yomlawuli, ayibuzi iphasiwedi, isiqinisekiso kuphela.
Bengiyisebenzisa ku-OpenSUSE futhi bengingayithandi nhlobo, bengivame ukuthola amaphakheji ayizimpinda.
Yebo, okungenani ku-Debian, kusebenze njengentelezi kimi. Impela, ku-OpenSUSE, abayivumelanga kahle i-Apper ukuze ibe wusizo ngempela kuma-newbies.
Kungcono ukufaka isoftware evela kuYast, yize kungekho okuhlula iSynaptic, iyinkosi yabaphathi be-software yi-UI.
Kungenxa yokuthi imvamisa lapho uvulwa uthola iphakethe + ne-'src 'yephakeji, hhayi ukuthi ziyimpinda.
Njengomsebenzisi we-novice Arch, ngifunda ukusebenzisa i-pacman .. kepha uma nginemibuzo ngamaphakeji nemvelaphi yawo ngiphendukela ku-octopi esikhundleni salokho. Ngiyifaka kusuka ku-AUR ... Nginikeza isixhumanisi uma kungenzeka ...
Kusafanele uqaphele ukuthi i-chakra iza ne-octopi esivele ifakiwe.
Bengicabanga ukusebenzisa i-Octopi (njengomsebenzisi we-Arch nge-KDE), ungayincoma kune-Apper?
Pacman uyabusa !! Bengingeke ngiyishintshe nganoma yini.
Ngizoyizama ukubona ukuthi kuhamba kanjani.
Ngidonsa iPacmac, kepha ngifuna ukuhlanza futhi uPamac kusamele athuthukise iqiniso.
Kulungile, ungayifaki, ifaka yonke i-KDE XD
Ngabe ucabanga ngempela ukuthi kunesidingo seposi mayelana ne-archlinux? Ukuthi ababona nje abasebenzisi be-noob. Banolwazi oluhle (ngokwesilinganiso). Futhi konke okuseshwayo konke ku-wiki (ngesiNgisi) futhi yilokho okuvela kuqala kusesho lwe-google ... Ama-noobs nokunethezeka waphephela kumanjaro.
Lolu hlelo lubuye lungenelele kakhulu, lusebenzisa inqwaba yenqama, i-cpu futhi lisebenzisa ithrafikhi eningi.
Oh yini badass !!!!
Ngiyamthanda uPacman, kepha omunye umsebenzisi we-ArchLinux angafuna ithuluzi lokuqhafaza ukufaka amaphakheji abo. Ukusatshalaliswa okunjengeChakra neManjaro, kubonakala kimi ukuthi banesifaki sokuqhafaza, kepha ku-ArchLinux ayikho, noma okungenani lokho engikwaziyo.
Abasebenzisi be-Arch banomkhuba wokufunda i-wiki futhi banikele ku-edishini, kumahhala futhi noma ngubani angakwenza.
Uma ungasebenzisi i-KDE Apper akuyona inketho enhle, njengoba kuya ngokuthi indawo yokusebenzela kdebase izokufakela amaphakheji amaningi we-KDE. I-Apper isebenzisa i-PackageKit njengokubuyela emuva, eGnome (nakwezinye izindawo ze-GTK) ongazisebenzisa gnome-iphakethe okuyi-front-end yePhakejiKit futhi engenakho ukuncika kwe-KDE.
Kukhona okuhle kakhulu okusebenzisa i-Antergos engicabanga ukuthi ilungele i-Arch
Enye into yokugcina, ngingenza kanjani ukushelela komthombo ngisebenzisa iGnome Shell?
Lapho ithola, ikubuza ukuthi uyafuna yini ukufaka iphakethe, kusobala ukuthi kufanele ubeke i-Y, noma i-S (uma uhlelo lungeSpanish)
Futhi kuya ngephakeji, kubuza eminye imibuzo okuthi uma ungazi, vele ushaye u-Enter bese kuba yilokho.
Futhi ngikhuluma ngezinye izindlela zamahhala zeCanel ...